एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्षमा लामिछाने नै किन ? एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्षमा लामिछाने नै किन ?
एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्षमा लामिछाने नै किन ?
अमेरिका । अमेरीकामा मे महिनामा हुने गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन अमेरिकाको सभापतिमा शालीन व्यक्तीत्व कृष्णप्रसाद लामिछानेले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले आफ्नो उम्मेदवारीका दिएका नारा लोकप्रीयताका लागी मात्र नभएर अमेरीकामा रहेका नेपालीको पक्षमा काम गर्नका लागी आवश्यक विषयलाई उठान गरीरहेका छन् । उनको विगतको कर्मले पनी अमेरिकामा बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरुको मनजितीरहेको अमेरीकामा वस्ने नेपाली हरु वताउछन् ।
उनी अमेरिकामा बस्ने नेपालीका माझ अत्यन्तै लोकप्रिय छन् । गण्डकी प्रदेशको गोरखा जिल्लामा जन्मिएका कृष्ण लामिछाने २० वर्षदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् । अमेरिकामा बस्दै आए पनि उनले नेपालमा पटक पटक गरेर निक्कै ठूलो सहयोग गर्दै आएका छन् । एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचन मुखैमा आइसकेको छ । निर्वाचनको मुखमै आइपुग्दा लामिछानेले अमेरिकामा रहेका हस्तीहरु विष्णु सुवेदी, प्रमोद सिटौला, धनन्जय नरसिह केसी लगायतको समर्थन पाएकानले पनी जितको बलियो आधार तय गरिसकेका छन् ।
सम्पूर्ण अमेरिकाका नेपाली समुदायको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण पनि आम गैरआवासीय नेपालीहरुले उनको साथ दिने देखिएको छ । । ‘मलाई मत भन्दा पनि आशिर्वाद चाहिन्छ । एनआरएनए अमेरिकाको आगामी निर्वाचन केवल संस्थाको नियमित प्रकृया मात्र होइन, यो विशाल संस्थालाई नियममा हिडाउन म तयार छु’ उनले भने,। ‘सबैभन्दा ठूलो एनसीसीको बलले आईसीसीमा अमेरिकाको एनआरएनएनको साख र प्रभाव राख्न सही पात्रको छनौट हुन पनि जरुरी छ र त्यसको लागि म अहोरात्र जुट्ने छु । हुन पनि उनी एनआरएन अमेरिकाको सभापति बन्न सक्ने हिम्मतवाला पात्र पनि हुन् । कोरोना संक्रमणकाल बेला होस वा नेपालमा गएको विनासकारी महाभुकम्पले नेपाल क्षतविक्षत बन्दा नेपालीहरुको सहयोगी पात्र बने । दुःखमा परेका नेपालीहरुको आशा र भरोसाको केन्द्र बने । त्यही भएर पनि यही मे महिनामा हुने निर्वाचनमा विजयी हुनेमा उनी विश्वस्त छन् ।
‘२० वर्षे अमेरिकन जीवनमा यहाको नेपाली समुदायप्रतिको मेरो अगाध माया र लगाव अनि यही सामुदायिक अभियानको लामो अनुभवलाई एनआरएनएमा जोडेर काम गर्ने प्रणका साथ गाली र तालीको पूर्ण आशा गर्दछु’ उनले भने, ‘निर्वाचनका बेला मात्र होइन, अरु जुनसुकै बेला पनि म नेपालीहरुको सेवामा हाजीर हुनेछु । उनले पछिल्लो समयमा विश्वमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई अनेक प्रकारको सहयोग गरे । उनले नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिकामा बस्ने नेपालीलाई पनि कोरोना संक्रमणकालिन अवस्थामा निक्कै ठूलो योगदान दिएका छन् ।
नेपालीमाझ निक्कै लोकप्रिय रहेकाले पनि आफु एनआरएन अमेरिकाको सभापतिमा विजयी बन्ने बताउँछन् । मलाई अमेरिकामा बस्ने सबै नेपालीहरुको साथ छ । मैले लामो समयदेखि आपत विपतमा परेका नेपालीहरुलाई विना स्वार्थ सहयोग गर्दै आएको छु’ उनले भने। ‘मैले एनआरएनमा के कस्ता मुद्दा उठाउनुपर्छ भनेर राम्ररी बुझेको कारण पनि आगामी दिनमा नेपालीको समस्या उठान गर्दै समाधानमा पहल गर्ने मेरो प्रतिवद्धता भएका कारण पक्कै म विजयी बन्ने छु ।